On1.click | ဟာရမ်
... ်။ ဘုရားသခင်က တားမြစ်သော အပြုအမူ အလုပ်အဆောင်တို့ကို ဟာရမ်အဖြစ် သတ်မှတ်...
ဟာရမ် (ပါရှန်း: حَرَام‎‎) သည် အာရပ်ဘာသာအရ တားမြစ်သည့်အရာဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ဘုရားသခင်က တားမြစ်သော အပြုအမူ အလုပ်အဆောင်တို့ကို ဟာရမ်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ အစ္စလာမ္မစ်ပညတ်တော် ၅ ပါးတွင် တပါးအဝင်အပါဖြစ်ပြီး လူသားတို့၏ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုအတွက် မှတ်ကျောက်တခုပင်တည်း။ 
ဟာရမ်ဖြစ်စေသော အပြုအမူအလုပ်အဆောင်ကို ဘာသာရေးစာအုပ်များ၊ ကိုရန်ကျမ်းတို့တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဟာရမ်ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားသောအရာကို ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စေတနာသန့်သန့်ဖြင့်ဖြစ်စေ လုပ်ဆောင်သည်ဟူ၍ သွေဖည်ခွင့်မရှိ။  စီရင်ချက်နေ့တွင် ဟာရမ်သည် မြေဆွဲအားအဖြစ်ပြောင်းလဲကာ ဂျန္နက် (ငရဲ) သို့ ဆွဲချမည့်အလေးတုံး ဖြစ်လာမည် ဟူ၏။ သို့သော် ဘာသာရေးကျောင်းအလိုက် မည်သည်က ဟာရမ်ဖြစ်သည်၊ မည်သည်က မဖြစ်၊ အတိမ်အနက် ကွဲသေးသည်။ 
↑ Adamec, Ludwig (2009). Historical Dictionary of Islam, 2nd Edition. Lanham: Scarecrow Press, Inc. p. 102.
↑ Al-Qardawi, Yusuf (1999). The Lawful and the Prohibited in Islam. American Trust Publications. p. 26.
↑ The Palgrave Handbook of Spirituality and Business – p. 142, Professor Luk Bouckaert, Professor Laszlo Zsolnai – 2011